NY FITIAVANA: Martin Vrijland
Ilay menarana, Kundalini, Eva, fitiavana sy fahazavana
Filed in NY FITIAVANA	by Martin Vrijland	amin'ny 6 Janoary 2016	• 11 Comments
Mba hahatakarana tsara ity lahatsoratra ity dia ilaina ny fahalalanao ny fahalalanao ara-pivavahana. Ohatra, ilaina ny mahafantatra ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Baiboly. Ny tantaran'i Adama sy i Eva dia tonga amin'ny endriny samihafa ary toa mihoatra noho ny angano ara-pivavahana fotsiny [...]
Ny fitiavana, ny fifangaroana ambaratonga miaraka amin'ny loharano niorenantsika tany am-piandohana
Filed in NY FITIAVANA	by Martin Vrijland	amin'ny 9 Aprily 2015	• 7 Comments
Misy asa soratra marobe ao amin'ny Baiboly. Boky boky izay ahitana olona mihabetsaka hatrany manomboka mahatsapa fa afaka mampitovy izany amin'ny vaovao anio isika; amin'ny heviny fa ny vaovao rehetra dia voafaritr'ireo masoivoho vaovao. Noho izany, ny boky rehetra ao amin'ny Baiboly dia navoakan'ny rafitra iray ihany koa. Mazava ho azy [...]
Ny fahasambarana, ny tahotra ary ny fifandraisana amin'ny fitiavana
Filed in NY FITIAVANA	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Aprily 2015	• 3 Comments
Toa mitady fahasambarana foana ny olombelona, ​​saingy toa tsy miraharaha ny fahasambarana foana. Raha lavo amin'ny sofinay isika dia mahatsiaro ho faly, fa ny tahotra ny fahaverezana dia mitombo ihany koa. Raha nahazo vola be fotsiny isika ary afaka mividy fiara tsara tarehy, dia [...]
Total visits: 14.677.133